October 2016 - Sawirrotv
Ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka Argagixisada ee loo yaqaano CTS ayaa magaalada u jirsatay 1.5 km, iyagoo gudaha u galay deegaanka Bazwaya oo ah tuuladii u dambeysay ee kaabiga ku heysa Mosul. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Wariye ka tirsan BBC-da oo la socda Ciidamada Ciraaq ayaa sheegaya in iska caabin …
Maraakiib ku soo Dhawaatay Magaalada Qandala iyo Shacabkii oo ka Cararay Magaaladaasi (Dhagayso)
October 31, 2016 – Maraakiibta dagaalka ee Wadamada Reer Galbeedka, ayaa waxaa la soo sheegaya in ay ku soo dhawaadeen Degmada Qandala ee Gobolka Bari. Waxaa kaloo hawada Degmada Qandala lagu arkay diyaarado dagaal, taasoo walaac ku beertay dadkii deegaanka, oo bilaabay inay isaga cararan guryahooda. Waxay tani ka dambeysay iyadoo Degmadaasi ay haystan dagaal-yahano …
October 31, 2016 – Beer xayawaanka lagu xareeyo oo ku taal magaalada Jiangxi ee dalka Shiinaha ayaa waxaa maanta ka dhacay arin yaableh, kadib markii nin dalxiise ah uu ka booday darbigii beerta ee uu xeradiisii ugu galay xayawaanka Panda-da loo yaqaan. Xayawaanka ayaa hurdayay markii wiilkan uu ka soo boodayay darbiga, waxa uuna isku …
Ninkii Xayawaanka Hurdada ka Kiciyay (VIDEO)
Xayawaanka ayaa hurdayay markii ninkan uu ka soo boodayay darbiga, waxa uuna isku dayay in uu salaaxo xayawaankii pandada ahaa oo hurdaya. Wiilkan ayaa maanta noqday kan loogu fiirsiga badanyahay ee dhanka Social-media-ha, waxaana Muuqaalkani wadaagay dad kor u dhaafaya ilaa 15,000,000.
Ciidamada Kenya oo Sheegay Inay Dileen 140 Dagaalyahan oo Katirsan Ururka Al Shabaab (VIDEO)
October 31, 2016 – Dowladda Dalka Kenya ayaa Sheegtay in Ciidamadeedu ay dagaal ku dileen 140 dagaalyahan oo ka tirsanaa ururka Al Shabaab, Sidani ayaa waxaa lagu qoray Wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya. Dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhacay Degmada Afmadow todobaadkii aanu soo dhaafnay, waxaana Sarkaal ka tirsan ciidamada …
Kenya oo Dishay 140 Al Shabaab ah (VIDEO)
Dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhacay Degmada Afmadow todobaadkii aanu soo dhaafnay, waxaana Sarkaal ka tirsan ciidamada Kenya ee uu soo xigtay Wargeyska The Star, ayaa shaaciyay in dagaalyahanada ay ahaayeen kuwo qorshe ku socday oo aad u tiro badan. Waxa uuna sheegay sarkaalka in dagaalkii culuslaa oo dhacay ay ciidamada Shabaabka Degmada Afmadow …
Dowlada Federaalka oo Amartay in la Xiro Safaaradda Soomaaliya ee dalka Yeman
October 31, 2016 – Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Yemen Cusmaan Axmed Maxamed ayaa warbaahinta u sheegay in Warqad kaga timid Wasaarada Arimaha Dibadda ee Soomaaliya, taas oo lagu amray in mudo bil gudaheed ah lagu soo xiro Safaarada Soomaaliya ee magaalada Sanca. Waxana uu sheegay safiirka in warqada kaga timid wasaarada arimaha dibadda ee …
Ciidamada Puntland oo ku Wajahan Magaalada Qandala oo ay Gacanta ku Hayaan Koox Taabacsan Daacish
October 31, 2016 – Wararka inaga soo gaaraya gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Puntland ay wadaan abaabul dagaal oo ay ku doonaayaan in Magaalada Qandala ay kaga saaraan kooxda Daacish. Taliyaha ciidanka maamulka Puntland ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay ka saari doonaan kooxda Daacish magaalada Qadiimiga ah Qandala oo dhawaan gacanta …
October 31, 2016 – Maxkamadda magaalada New Orleas ee dalka Maraykanka ayaa fasaxday in la baahinkaro muuqaal laga duubay weerar uu nin 63-jir ah uu dabayaaqadii sanadkii hore ka gaystay garoonka diyaaradana ee magaalada New Orleans ee dalka Maraykanka. Ninkan weerarka gaystay oo magaciisa lagu sheegay Richard White ayaa halmar baangad kala soo baxay bac …